2017 ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက် | Gadget သတင်း
ဟိုဆေး Alfocea | | tablets
သင်တို့ထဲကအများစုဟာတက်ဘလက်အသစ်တစ်ခုကိုရှာနေကောင်းတွေ့လိမ့်မည် သင့်စက်ဟောင်းကိုအစားထိုးပါ သို့မဟုတ်သင်ဖြစ်ချင်တာကသင်လိုချင်သောအရာဖြစ်သည် သင်၏ပထမဆုံးစားပွဲကိုဝယ်ပါt ။ ယခုအချိန်သည်အချိန်ကောင်းဖြစ်ပြီး၊ အသစ်စက်စက်စက်ပစ္စည်းများ (ကျောင်းသို့ပြန်၊ အလုပ်ပြန်ဆင်း ... ) မည်သို့ထိမိသနည်း၊ မည်သည့်တက်ဘလက်ကိုရွေးချယ်ရမည်နည်း။
အမှန်တရားမှာစျေးကွက်သည်ဒီဇိုင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းအရရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်ပြည့်စုံပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုအလင်းပေးပြီးသင့်ကိုပြချင်ပါတယ် 2017 ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်အချို့။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အဆိုပြုထားသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုရွေးချယ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စတင်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောတက်ဘလက်ကိုသင်သေချာပေါက်ကူညီလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
15၏အကောင်းဆုံး tablet ကို
1.1 Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S3
1.2 Lenovo Yoga စာအုပ်
1.3 Asus ZenPad 3S ၁၀
1.4 ကျနော်တို့ Xiaomi က Pad 3
2 2016 ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်
5 ၏အကောင်းဆုံး tablet ကို
"သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံး" ငါကိုယ်တိုင်ကိုးကားတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အရည်အသွေး၊ အစိတ်အပိုင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်စသဖြင့်အချို့သောတက်ဘလက်များသည်အခြားသူများထက်ပိုကောင်းသော်လည်း၎င်းသည်လည်းမှန်ကန်သည် အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်သည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်ကအင်တာနက်ကိုသုံးရန်၊ YouTube ဗွီဒီယိုများကြည့်ရန်၊ အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုသာအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားလျှင် iPad Pro ၏ထိပ်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွင်ယူရိုတစ်ထောင်မျှသို့မဟုတ်သုံးရန်မလိုပေ။ ။ ပြီးတော့သင်လိုချင်တာကနေရာတိုင်းကိုယူပြီးသိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်လိုချင်တာကအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်တွေကိုစားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်၊
အလားတူပဲ၊ သင်တက်ဘလက်အသစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်သည်သို့ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုကိုစီမံခန့်ခွဲ, မှတ်စုများနှင့်အခြားအရာများအနေဖြင့်သင်အားကောင်းသော multitasking ပါ ၀ င်သည့်အားကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်သည်။ သင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်တွန့်ဆုတ်မနေပေ။
သူကပြောပါတယ်, လာမည့်ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် အကြွင်းမဲ့အသုံးအနှုန်းအတွက် 2017 ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်အချို့ဆိုလိုသည်မှာကြီးမားသောအရည်အသွေး၊ စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်၊ အိမ်၏အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းထက်ဘရောက်ဆာတွင်ဤ post ကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်လည်းအလားတူအသုံးဝင်သည်။ ငါတို့စတင်သည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S3
ဘာစီလိုနာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Mobile World Congress တွင်တင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် Samsung ရဲ့ Galaxy Tab ကို S3 ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီကိရိယာမှာ ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် Resolution 1536 x 2048 pixels နှင့်နေရာတိုင်းတွင်၎င်းအားအသုံးပြုလိုသူများအတွက်နှင့်၎င်းတွင်အလုပ်နှင့် / သို့မဟုတ်လေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်သည်။
အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်၎င်းအတွင်း၌ Android7Nougat နှင့်အတူပါရှိသည် Processor ကို Snapdragon 820 quad-core တွင် Adreno 530 GPU ပါ ၀ င်သည်။ RAM4GB, 64 GB သိုလှောင်မှု 256 GB အထိရရှိနိုင်သော microSD ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ တိုးချဲ့နိုင်သည် 6000 mAh ဘက်ထရီ မြန်သောအားသွင်းစနစ်နှင့် USB-C connector နှင့်အတူ။
သူတို့ရဲ့ လေး AKG / Harman စတီရီယိုစပီကာ တစ် ဦး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသံကိုအတွေ့အကြုံအဘို့အနိမ့်နှစ်ဖက်အပေါ်သျော။
တက်ဘလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဓာတ်ပုံတွေများများစားစားမလုပ်သော်လည်း၊ ၎င်းကိုမမေ့နိုင်ဘူး 13 MP အဓိကကင်မရာ ဗီဒီယိုများကို 4K နှင့် 30 FPS ဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်။
2017 ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များအနက်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာဤဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်အရှေ့တိုင်းကုမ္ပဏီမှလာသည်။ အဲဒါအကြောင်းပါ Lenovo Yoga စာအုပ်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကျန်တက်ဘလက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Lenovo Yoga Book သည်၎င်းအမျိုးအစားဖြစ်သည် စပ်ပစ္စည်း ၎င်းတွင်ထိတွေ့နိုင်သောကီးဘုတ်နှင့်အပို panel နှစ်ခုလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်လက်ဖြင့်သင်ရေးသားနိုင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် class note များပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအလုပ်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်။ ကြောင့်တစ် ဦး ရှိပါတယ် ၁၀.၁ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင် (1920 x 1200 pixels) နှင့်အတွင်းပိုင်း၌aProcessor ကို အက်တမ် X5-Z8550လိုက်ပါသွားသည် RAM4GB y 64 GB သိုလှောင်မှု ပြည်တွင်းရေး။ ထို့အပြင်၎င်း၏ ၈၅၀၀ mAh ဘက်ထရီသည်အားသွင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ၁၀ နာရီကြာအသုံးပြုမည်ဟုကတိပြုထားသဖြင့်သင်သည်အလုပ်ခွင်၌၊ အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ အဝေးတွင်ဖြစ်စေကျယ်ပြန့်သောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုခံစားနိုင်သည်။
အထက်ပါအချက်များအားလုံးနှင့်အတူ၎င်းသည် (က) ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးပေါ့ပါးသောစက်ပစ္စည်း၎င်းသည်အလေးချိန် ၆၉၀ ဂရမ်သာရှိပြီး micro SD ကတ်များအတွက်စာဖတ်သူလည်းပါ ၀ င်သည်။ LTE ဆက်သွယ်မှုBluetooth၊ WiFi အပြင် 8 MP အဓိကကင်မရာနှင့်ရှေ့ကင်မရာ ၂ MP တို့ကစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၎င်းအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
Asus ZenPad 3S ၁၀
ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနှင့်၎င်း၏အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် Asus ZenPad 3S ၁၀, အမည်, ကြားမှသော်လည်း, တစ် ဦး ကိုကမ်းလှမ်းသောတက်ဘလက် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် resolution 2048 x 1536 pixels နှင့်တစ်လက်မလျှင် pixel သိပ်သည်းဆ ၂၆၄ ဖြစ်သည်။
အလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းအိုင်ပက်ကိုလေကောင်းတစ်ခုသယ်ဆောင်ပေးသည်မှာမှန်ပါသည်၊ MediaTeK ပရိုဆက်ဆာ လိုက်ပါက MT8176 ခြောက်ခုပါ 4GB RAM, 64GB သိုလှောင်မှု အတွင်းပိုင်း, ၅၉၀၀ mAH ဘက်ထရီ၊ microSD ကဒ်အထိုင်၊ USB Type-C connector စသဖြင့်။
အားနည်းချက်သည် ၄ ​​င်း၏အလေးချိန် ၄၃၀ ဂရမ်ရှိပြီးကင်မရာ၊ ရိုးရှင်းသော၊ ၈ MP အဓိကနှင့်ကင်မရာမှာရှေ့ကင်မရာဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏အမျိုးအစားထဲမှာအပေါ့ပါးဆုံးတက်ဘလက်များထဲမှ.
ကျနော်တို့ Xiaomi က Pad 3
မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ပိုမိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်စာများဖတ်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းနှင့်အလားတူအလုပ်များအတွက်၊ အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များထဲမှတစ်ခုမှာဤအချက်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကျနော်တို့ Xiaomi က Pad2နှင့် ၁.၂၆ လက်မမျက်နှာပြင် Resolution 2560 x 1600 နှင့်အလေးချိန်မှာ ၃၂၈ ဂရမ်သာရှိသည် MediaTek MTK8176 ခြောက်ခုပရိုဆက်ဆာ လိုက်ပါသွားသည်4GB RAM, 64 GB ကို ချဲ့နိုင်သောပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှုနှင့်တစ် ဦး ၆၆၀၀ mAh ဘက်ထရီသည် ၁၂ နာရီကြာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည်.
ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံအပိုင်း၌၎င်းတွင်ရှိသည် 13 MP အဓိကကင်မရာ autofocus နှင့် aperturef/ 2.2 တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရှေ့ကင်မရာ ၂ MPf/ 2.0 ကို aperture နှင့်အတူ။
ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေမင်းတို့ပြောဖို့နေထွက်ရာနေပြည်တော်ကိုသွားခဲ့တယ် Sony Xperia Z4တက်သွားတဲ့စိတ်ကူးတက်ဘလက်တစ်ခု ၁၀.၁ လက်မမျက်နှာပြင် Resolution 2560 x 1600 Pixels ဖြင့်အရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးသည်အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာမှုများအတွက်သင့်တော်သည်။
ဒီတက်ဘလက်ဟာစွမ်းအားဖြင့် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာ Snapdragon 810 နေဖြင့်3GB RAM နှင့် 32 GB သိုလှောင်မှု microSD card slot ကို အသုံးပြု၍ internal expandable 6.000 mAh ဘက်ထရီ.
အလေးချိန် ၃၈၉ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိပြီးအလွန်ပါးလွှာပြီးပေါ့ပါးသည်။ ရေစိုခံ၎င်းတွင် 8,1 MP ရှေ့ကင်မရာနှင့်အတူ 5,1 MP အဓိကကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည်။
အမှန်တရားကတော့ ၂၀၁၇ ရဲ့အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်များစာရင်းထဲမှာပါ ၀ င်နိုင်တဲ့အချို့သောတက်ဘလက်များကိုသူတို့ယခုနှစ်ဈေးကွက်ထဲမ ၀ င်သေးရင်တောင်ဖော်ပြနိုင်မှာပါ။ မဆိုထပ်မံသွားစရာမလိုဘဲ MediaPad M3 ၈.၄ လက်မမျက်နှာပြင်ပါရှိသည့် Huawei ၏ MediaPad T2 10.0 Pro ကို, ဒါမှမဟုတ်စပိန် Aquaris M10 BQ သူတို့ဟာခိုင်မာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပါ။ ဒါပေမယ့် Android ဆိုတာကိုသူကဘာလဲဆိုတာပြောဖို့စွန့်လွှတ်ခဲ့တာပါ la အကောင်းဆုံးတက်ဘလက် 2016: Apple's iPad Pro.
သင်၏အာရုံကိုဖမ်းမိမည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာကယခင်မျိုးဆက်ကိုငါဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် Pro ကိုအိုင်ပက် (၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၁၂.၉″ ပုံစံနှင့် ၂၀၁၆ နွေ ဦး ရာသီတွင် ၉.၇″ မော်ဒယ်လ်ကိုတင်ပြသည်) နှင့်လက်ရှိမော်ဒယ်များကိုမတင်ပြပါ။ အကြောင်းပြချက်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ Apple သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထူးခြားသောတိုးတက်မှုများကိုရောင်းချရန်ကြိုးစားသလောက်၊ iPad Pro ၏ဒုတိယမျိုးဆက်သည်ပထမမျိုးဆက်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ သင်ကအများကြီးပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းမှာရနိုင်သည်.
အိုင်ပက် Pro ကိုမှကျနော်တို့က၎င်း၏ကြီးမားသောမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ် 12,9″ Retina displayများစွာသောမှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများထက်သာလွန်သည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 10 နာရီ၎င်း၏အစွမ်းထက် A9X ပရိုဆက်ဆာ M9 motion coprocessor၊ Bluetooth 4.2 ဆက်သွယ်မှု၊ WiFi၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်၎င်းသည်အရွယ်အစားရှိသော်လည်းအလွန်ပေါ့ပါးပြီးပါးလွှာသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမဖော်ပြဘဲ ၇.၉ တက်ဘလက်ကဲ့သို့သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းမရှိပေ။ ″
သို့သော် iPad Pro နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသည့်အချက်မှာ iPad Pro မဟုတ်ပါ iPad Pro နှင့် iOS နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ operating system, အထူးသဖြင့် iOS 11, သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအဆင့်အသစ်သို့ယူသည်။ အခုငါ့ iPad လိုပဲ iPad နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီ။ The စမတ် Keyboard ကို ၎င်းသည်ကိရိယာနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ပြီးသင် Bluetooth ကိုမလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်သော့များကိုနှိပ်ပြီးသောအခါသင်ရိုက်ထည့်သောအရာများသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်။
နောက်ဆုံးတော့ Apple ကခဲတံပုံဆွဲပုံကို (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့မဟုတ်ပါ) နှင့်လက်ဖြင့်လက်ဖြင့်မှတ်စုများယူရန်သိထားသူများအတွက်တိကျမှု၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်းနေချိန်၊ နှစ်သိမ့်မှု၊
ငါသည်ငါ့ iPad ကိုဒုတိယမျိုးဆက်နှင့်အတူ, နှင့်အတူနွေရာသီအစောပိုင်း၌ဝယ်ယူခဲ့သည် စမတ် Keyboard ကို နှင့် Apple ခဲတံ။ မင်းစိတ်ကူးကြည့်လို့ရပြီ၊ ပစ္စည်းသုံးခုကိုငါငွေစုခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်ထိုအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်သည် iOS 11 (beta) ကိုသုံးပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလားအလာကိုမိနစ်သုညမှအပြည့်အဝယူရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ဒီတော့မင်းကရှာမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးကို tablet များ ထို့အပြင် 2017 ၏ iPad Pro, အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်ပထမမျိုးဆက်သည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » tablets » 2017 ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်